We She Me: မုန်လာချဉ်ဖတ်သုပ်
Nu Thwe - 9/28/08, 8:34 PM
ကောင်းမှကောင်းပဲ။ လုပ်စားမယ်။ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ။
nu-san - 9/28/08, 9:02 PM
ဟီ..ဟိ.. ဒီတခါတော့ တကယ်ကို မုန်လာဥ အချဉ်တည်ပြီး လုပ်စားမယ်ကွ... တခါအချဉ်စိမ်သေးတယ်.. Andy ပြောတဲ့နည်းနဲ့ မတူဘူး.. စားမကောင်းဘူး..
Andy တို့ဆီမှာလည်း မုန်လာဥတွေက အကြီးကြီးတွေပဲထင်တယ်.. ပုံထဲကြည့်ရတာ.. ဒီကမုန်လာဥတွေကလည်း အတော်လေး ကြီးတယ်..တခါချက်ဆို အများကြီးပဲ.. အသေးလေးတွေ ခွဲခွဲပြီးဝယ်လည်း မရဘူး. အိမ်မှာ ကျန်နေတာများတယ်.. အခုတော့ အတော်ပဲ.. နည်းသိသွားပြီ.. :)
pandora - 9/28/08, 9:33 PM
မုန်လာဥအချဉ်သုတ်ကို ကြိုက်တယ်။ ပဲပင်ပေါက်အချဉ်သုတ်လည်း ကြိုက်တယ်။
မွန် - 9/28/08, 9:34 PM
khin oo may - 9/29/08, 1:09 AM
ကြိုးစားကြည်.သေးတာပေါ့. အချဉ်ဘဲဖြစ်သွားမလား ပုပ်သွား မလားမသိ. (ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလို.ပြောတာပါ)
ThuHninSee - 9/29/08, 3:28 AM
Moe Cho Thinn - 10/1/08, 5:24 AM
တို့က အချိုကြိုက်တဲ့ လူမိုက်ပါ။
Andy Myint - 10/1/08, 8:29 AM
ဟုတ်တယ် မနုစံ။ ဒါတောင် အသေးဆုံးဟာ ရွေးဝယ်လာတာ။
ကျွန်တော်လည်း ပဲတီချဉ်ကြိုက်တယ် မပန်။ ဆီချက်လေးနဲ့ ဆားလေးနဲ့ပဲ နယ်ပြီး သုတ်စားလည်း စားကောင်းတယ်။
သမီးလေး နေကောင်းတယ် မမွန်။ ချဉ်ဖတ်နဲ့ဆို ထမင်း မြိန်တယ်။ အစာကြေတယ်လေ။
ခဏပဲ တည်ရင် မပုတ်ပါဘူး မမခင်ဦးမေရယ်
Welcome ပါ မသုနှင်းဆီ
ဗမာတွေလေ မချိုသင်း။ အချဉ် အပုတ်ဆို သိပ်ကြိုက်။
တန်ခူး - 10/1/08, 12:04 PM
ကိုအန်ဒီရေ… ကျွန်မက ထမင်းရည်နဲ့ အချဉ်တည်တာ… နောက်ဆို အဲလိုလေး အချဉ်တည်ကြည့်ဦးမှ… အသုတ်လေးက မြင်တာနဲ့ သွားရည်ယိုစရာ…
Andy Myint - 10/3/08, 9:07 AM
ထမင်းရည်နဲ့က ပိုကောင်းတာပေါ့ မတန်ခူး။ ကျွန်တော်တို့က ထမင်းရည် မရှိလို့ ထမင်းလုံးထည့်ပြီး တည်လိုက်တာ။ ထမင်းရည်နဲ့ကတော့ ပိုပြင်းတယ်။ ထမင်းလုံးနဲ့က အချဉ်ပေါက် မလွယ်ဘူး။
khin oo may - 10/4/08, 3:44 PM
ဂလုဂလု. မုန်လာဥ အခုသွားဝယ်မယ်။
Anonymous - 10/23/08, 1:47 PM
I saw before in your web.
You using egg mould & making many patterns of yolk such as star, heart..
I would like to buy this mould for my mother's birthday.
Could you pls let me know product name?
Andy Myint - 10/23/08, 1:57 PM
Andy - (Not Aunty)
Anonymous - 10/23/08, 4:23 PM
Good Day Andy..